မီးရှုးမီးပန်းတွေ (Fireworks) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » မီးရှုးမီးပန်းတွေ (Fireworks)
Posted by Mr. MarGa on Oct 14, 2013 in Arts & Humanities, Creative Writing, Cultures, History, Society & Lifestyle | 26 comments
တာဝတိံသာမှ အက်ဆေးများ တာဝတိံသာ research center ဦးမာဃ တွေးမိတာလေးတွေ
ရေးမယ်လုပ်လိုက်၊ ဝေ့လိုက် နောက် ရေးမယ်လုပ်လိုက် ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်နဲ့ မေ့သွားလိုက် နဲ့။
ဘယ် ရေးဖြစ်မတုံး တစ်ယောက်တည်း ပတ်ပြီး အလုပ်ရှုပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေတာလေ…။
အခုတော့ သီတင်းကျွတ်နား နီးပြီမို့
ဟို ဂျီးဒေါ်ကို ကတိပေးထားတာလဲ ရှိ။
ကိုယ်တိုင်လဲ နည်းနည်းပါးပါး မွှေနှောက်မိတာာမို့
ဦးမာဃ ရဲ့ တာဝတိံသာ research center ကနေ တင်ဆက်ချင်တာကတော့
မီးရှုးမီးပန်း (fireworks) တွေ အကြောင်းပါ။
တွေ့သလောက် နားလည်သလောက် တတ်သလောက်၊ မှတ်သလောက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
မီးရှုးမီးပန်း ဆိုတာကတော့ အနုပညာ ဖန်တီးမှုတွေ၊ ရိုးရာပွဲတော်တွေ၊ ဘာသာရေး ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ အရာဝတ္တုတစ်မျိုးပေါ့။
သူတို့တတွေက မီးပန်းတွေ၊ မီးခိုးတွေ၊ အလင်းတွေကို ထွက်အောင် လုပ်ထားတယ်လေ။
ဒီ မီးရှုးပန်းတွေက အခြေခံ ပုံစံ လေးမျိုးပဲ ထုတ်လို့ရတယ်။
အဲဒါတွေကတော့ အသံ၊ အလင်းရောင်၊ မီးခိုးတွေနဲ့ ရောင်စုံစက္ကူလို ကြဲဖြန့်လို့ရတဲ့ အရာတွေကို ထုတ်ပေးတာပေါ့။
အသံ၊ အလင်း နဲ့ မီးခိုးတွေ
ဒီ လေးမျိုးကိုမှ ပသာဒ ဖြစ်အောင် ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အဆင်အယင် အမျိုးမျိုးနဲ့ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
ပြောတော့သာ မီးရှုးမီးပန်း လို့ ပြောရတာ တကယ် ထည့်မယ်ဆို ဗျောက်အိုးတွေပါ ပါပါတယ်။
ဒီမီးရှုးပန်းတွေကို ရောင်စုံမီးပွားတွေ၊ မီးလျှံတွေအဖြစ် လောင်ကျွမ်းအောင်လို့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားတတ်ကြတယ်။
အများအားဖြင့်တော့ အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊အဝါရောင်၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင် ငွေရောင် စတဲ့ တောက်တောက်ပပ အရောင်တွေကို သုံးတတ်ကြသတဲ့။
မီးရှုးပန်းတွေကို အကြမ်းဖျဉ်း ပြောကြကြေးဆိုရင် သူတို့ကို ဘယ်လိုနေရာတွေအတွက် ရည်ရွယ်သလဲ ဆိုတာကိုကြည့်ပြီး ပြောနိုင်တယ်။
ဆိုလိုတာက မြေပေါ်မှာတင် သုံးလို့ရတဲ့ ဗျောက်အိုးလို၊ မီးပန်းလို အရာမျိုးတွေလား ဒါမှမဟုတ် မိုးပေါ်ထောင်ထားရတဲ့ မီးရှုးပန်းတွေ၊ ရွှီးဒိုင်းလိုမျိုး မီးရှုးတွေလား စသဖြင့်ပေါ့။
အဲ…မိုးပေါ်ကို ထောင်ပြီး ပစ်ရတဲ့ မီးပန်းတွေကို ထပ် ခွဲကြည့်လို့ ရသေးသဗျ။
လူရဲ့ အကူအညီမလိုဘဲ သူတို့ဘာသာ ယမ်းပေါက်ကွဲအား အကူနဲ့ တက်သွားတတ်တာမျိုးရှိသလို၊ အောက်ကနေ လူက လေထဲကို တစ်ခုခုရဲ့ အကူအညီနဲ့ ပစ်ပေးရတာမျိုးလဲ ရှိသတဲ့။
ပေါ့သေးသေးတော့ မထင်နဲ့နော… အခု တဖွတ်ဖွတ်နဲ့ လွှတ်နေကြတဲ့ ဒုံးပျံတွေက ဒီ မီးရှုးပန်းကို အခြေခံပြီး ထွင်ထားကြတာလေ။
ထွင်မပေါ့၊ ဟိုးအရင်တုန်းက ဒီ မီးရှုးတွေကို စစ်ပွဲတွေမှာ အချက်ပြ သင်္ကေတ အနေနဲ့၊ နောက်ပြီး သတင်းပို့ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ အနေနဲ့ သုံးကြတာကိုး။
(အဲဒီတုန်းက အခုလို ခေါ်မသိ၊ အော်မကြား ဖုန်းတွေ ရှိသေးဘူးလေ)
အပေါ်က ပြောခဲ့တာတွေက လေပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့၊ မိုးပေါ် ထောင်ပစ်ရတဲ့ အမျိုးအစားတွေပါ။(မိုးပေါ်ထောင်ပစ်တဲ့အထဲ သေနတ်တော့ မပါ)
မြေပေါ် ချထားရတဲ့၊ မြေပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဗျောက်အိုးတွေ၊ မီးပန်းတွေကတော့ မြေပေါ်မှာ ပုံဖော်တာမျိုး၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပုံသဏ္ဍာန်၊ အခင်းအကျင်းတွေ ဖော်ပြတာမျိုးအတွက် သုံးတတ်ကြပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ နှစ်မျိုးစလုံးကို စိတ်ကြိုက် ပုံဖော်လို့ သုံးလာကြပြီး မိုးမျှော် မီးပန်းများက ပိုလို့ တွင်ကျယ်လာပါတော့တယ်ဗျာ။
အပေါ်က အလှတရား အောက်က side effect
ဒါကတော့ သိပ် ပြောစရာလိုမယ် မထင်မိဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီ အလေ့အထကို စခဲ့တာက ပေါက်ဖော်ကြီးတို့တွေကိုး ဗျ။
ဘီစီ ၇ ရာစုလောက်မှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အထောက်အထားတွေ တွေ့ရပါသတဲ့။
ဒါက သက်သေ အခိုင်အမာနဲ့ ပြောနိုင်တဲ့ အစောဆုံးကာလပေါ့ဗျာ၊ အဲဒီမတိုင်ခင်ကတည်းက သုံးစွဲနေတာဖြစ်မယ်လို့တော့ မြင်မိပါတယ်။
ဒီ မီးရှုးမီးပန်းတွေ၊ ဗျောက်အိုးတွေကို ပွဲလမ်းသဘင်တွေအတွက် သုံးခဲ့ကြတာပါ။ ပေါက်ဖော်ကြီးတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု တစ်စိတ်တစ်ဒေသလို့တောင် ပြောလို့ ရသပေါ့။
အဲဒီကနေမှ တခြား လူမျိုးစုတွေဆီ၊ တခြားသော ယဉ်ကျေးမှုတွေဆီကို တဖြည်းဖြည်း ပျံ့နှံ့သွားသတဲ့။
မီးရှုးမီးပန်း ပြုလုပ်ရာမှာ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အနုပညာ ဖန်တီးမှုနဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေကို သိပ္ပံပညာနဲ့ပါ ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ရတာကြောင့် မီးရှုးမီးပန်း ပြုလုပ်သူတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ အလေးဂရုပြုရတဲ့၊ လူသူလေးစားခံရတဲ့ လူတန်းစားထဲမှာ ပါဝင်ကြပါတယ်။
မီးရှုးပန်းတွေဟာ ဆယ့်ခုနှစ်ရာစု အလယ်ပိုင်းလောက်မှာ ဥရောပကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တရုတ်လက်မှုပညာတွေနဲ့အတူ ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။
မီးရှုးပန်းပြုလုပ်မှု နည်းနာတွေကိုတော့ ပဲရစ်သိပ္ပံအကယ်ဒမီကို Pierre Nicolas le Chéron d’Incarville ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ၁၇၅၈ခုနှစ်မှာ ဘေဂျင်းကနေ ရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ။်
အဲဒီ နည်းနာတွေကို ငါးနှစ်အကြာမှာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး သိပ်မကြာမီမှာပဲ ဘာသာအသီးသီးကို ပြန်ဆိုခဲ့ကြတယ်။ ရလာဒ်အနေနဲ့ကတော့ ဒီ မီးပန်းတွေဟာ ဥရောပရဲ့ နေရာအနှံ့မှာ မင်းမူခဲ့ကြပါတယ်။
EU က မီးပန်း
မီးရှုးမီးပန်း ပြိုင်ပွဲတွေကို နှစ်စဉ် နိုင်ငံအတော်များများမှာ ကျင်းပကြပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ ပွဲတော်တွေကတော့ တရုတ်၊ ကနေဒါ၊ ပြင်သစ်၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေမှာ ကျင်းပတဲ့ ပွဲတော်တွေပေ့ါ။
ပြိုင်ပွဲမဟုတ်ဘဲ ပွဲတော်အနေနဲ့ ကျင်းပတာတွေကိုတော့ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်(အမေရိက)၊ တောင်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ချင်ကျားပုက မီးပန်း (စီအာ- ဟိုဂျီးဒေါ်)
ဒီနေရာမှာ ဝီကီက ခိုးချ(အဲလေ) ဘာသာပြန်တာကို တစ်ခန်းရပ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အမြင်လေးကို နည်းနည်း ပြောကြည့်ရရင်
မီးရှုးမီးပန်း လွှတ်တာ၊ ဗျောက်အိုးတွေ ဖောက်တာတွေကို ဦးမာဃ အနေနဲ့ကတော့ ပိုက်ဆံတွေ မီးရှို့နေတယ်လို့ မြင်မိတာ များပါတယ်။
နိုင်ငံတော် ပွဲလမ်းသဘင် အနေနဲ့ အခမ်းအနားတွေမှာ လုပ်တာကိုတော့ လုပ်သင့်တယ်လို့ မြင်ပေမင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့မိရင်တော့ အဲလိုပဲ မြင်မိနေပါတယ်။
ဦးမာဃတို့ဆီမှာ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်တိုင် နီးရင် သတင်းစာတွေ၊ ရပ်ကွက်ရုံးတွေကနေ အမျိုးမျိုး ကြေညာချက်ထုတ်လို့ တားမြစ်ပေမင့်
သီတင်းကျွတ်အတွက် တော်သလင်းလလောက်က စလိုက်တဲ့ ဗျောက်အိုးသံတွေက တန်ဆောင်တိုင်အထိ မစဲပါဘူး။
သီတင်းကျွတ် ဆိုရင် တစ်မြို့လုံး စစ်ပွဲကြား ရောက်နေသလား မှတ်ရတဲ့အထိ ဖောက်လိုက်ကြတဲ့ ဗျောက်တွေ တဖုန်းဖုန်း တဝုန်းဝုန်းနဲ့။
နှစ်တိုင်း ထုတ်တဲ့ ကြေညာချက်၊ တားမြစ်ချက်က ဘယ်ချောင်ဘယ်ကြား ရောက်သွားမှန်းတောင် မသိတဲ့အထိကို ဖောက်ကြတာ။
စာရင်းဇယား အတိအကျ မရှိလို့ တစ်နှစ်တစ်နှစ် ဒီ ဗျောက်အိုးတွေ မီးပန်းတွေ ပမာဏ ဘယ်လောက်အထိ သုံးစွဲနေကြတယ် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေကြတယ် ဆိုတာ ပြောဖို့မလွယ်ပေမင့် အမြင်နဲ့တင် ဒီဈေးကွက် ဘယ်လောက် ကျယ်ပြန့်တယ်ဆိုတာ မှန်းလို့ ရသဗျ။
အဆိုးဘက်ကနေ မြင်ပြီး ပြောနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း ကြေညာချက်တွေနဲ့ တားမြစ်ထားပေမင့် ဒီလောက်အထိ ကြီးမားတဲ့ ဈေးကွက်တစ်ခု ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကာ
ဒီလို တရားမဝင် လုပ်နေတာတွေက နိုင်ငံအတွက် အခွန်ငွေ မလျော့ပေဘူးလား
ဒါတွေကို သေသေချာချာ စည်းစနစ်တကျ စည်းကြပ်သတ်မှတ်ပြီး တရားဝင် ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုရင် ဖမ်းရ ဆီးရတာတွေ အလုပ်မလျော့ပေဘူးလား
မဟုတ်လဲ ဒီလောက် အရောင်းသွက်နေတဲ့ ရာသီကုန်ကို တရားဝင်သာ လုပ်ပေးလိုက်ရင် ရမယ့် အခွန်တွေလည်း တခြားကိုမရောက်တော့ဘူး၊ ရှေ့ကဖမ်း နောက်ကဖောက် ဆိုတာမျိုးတွေလည်း မတွေ့ရတော့ဘူးလေ။
ဒါကြောင့် တားမြစ်ချက် ကြေညာချက်တွေအစား ကန့်သန့်ချက်အချို့နဲ့ လုပ်ပေးလိုက်ရင် အချိန်ကုန်၊ အလုပ်ရှုပ် သက်သာလေမလား လို့ မြင်မိတယ်…ဗျာ။
http://en.wikipedia.org/wiki/Fireworks နဲ့ http://fireworksinfo.blogspot.com ကနေ ယူပါတယ်။
ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအကြောင်း၊ လုပ်ကိုင်နည်းတွေအကြောင်းကိုတော့ သိလိုတယ် ဆိုရင် နောက်တစ်ပုဒ်နဲ့ တင်ပေးပါမယ်။
တဂျားတို့ ဖေပြောင်ရဲ့ သားလေးတွေတောင် ခု ရန်ကုန်မှာ ဗျောက်ကြီးကြီးတွေ ဟိုနားဖောက် ဒီနားဖောက်လို့ ကြားတယ်။
ဒါနဲ့ ဟိုဂျီးဒေါ် ဆိုတာ မယ်လိုဒီ ကို ပြောတာလားဟမ်??
ဂလို စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် မလိုက်ဖူးပေါင်။
နာ တီထွင်ရင် တဂျားမင်း ကျောက်ဖြာအောက်လှမ်းထိမဲ့ မီးရှူး/မီးပန်း ထွင်စမ်းမယ်။
စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် လိုက်တာ အတော်ပင်ပန်းတယ်ဗျ
ဝီကီကို သွားလိုက်တာ တစ်ချက်ပဲ ဟီဟီ
ပြီးမှ dictionary နဲ့ ချာချာလည်တာ
စကား မရမက စပ် ပြီး ပြောရရင်ဖြင့်
အချဉ်ဆုံး မင်းသမီးတွေထဲမှာ ပါသဗျ
ပို့စ်လေးပါ…. ရှဲရှဲပါ ဦးမာဃရေ
ဒါ ရေးဖို့ကို နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့ ဖြစ်နေတာ ကြာပြီဗျ
ဒီထက် အပျင်းကြီးနေရင် သီတင်းကျွတ် လွတ်သွားမှာမို့
အမီဖြစ်အောင် ကမန်းကတန်း တင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာ
ဒီလိုင်း ဒီပုံနဲ့ ဒီလောက် မန့်ပေးတာ တကယ် ကျေးကျေးပါ ဦးမိုက်ရေ
ဂလောက်အဆင်ပြေအောင် ဘာသာပြန်ထားတာ ချီးကျွေး အဲ ချီးကျူးပါတယ်။ အတော်လေးလည်း စုံအောင်သိသွားတယ်။
ငါကတော့ ငါ့နားဗျောက်အိုးလာဖောက်ရင်ဆဲပစ်ချင်တာပဲ။ ဘာမှအကျိုးအမြတ်မရှိ။ ပိုက်ဆံလည်းကုန်တယ်။ သူများလည်းလန့်တယ်။ အန္တရာယ်လည်းများတယ်။ ငါ့နားလာဖောက်လို့ကတော့ လုံးဝကို သည်းမခံဘူးပဲ။
နားဖောက်တာ သည်းမခံဘူးပေါ့ ဟီဟိ
တကယ်လို့များ တစ်ယောက်ယောက် နားလာဖောက်ရင် ဘယ်လိုနေမယ်မသိ
ကလေးတွေ ပျော်ပါစေ နော့
မယ်လိုဒီ လှတယ်။ နာကြိုက်တယ်။ သူ့ကို။
ဒါကြည့်ပြီးမှ တဂျားပို့(စ) ဖတ်ကြပါ ခင်ညားးးးးးးး
သူ့ ဖိုတိုတွေက ဘာမှ အညင်ရဘူးးးးး
ဒီ ဂျီးဒေါ် သူများပို့စ်မှာ လာ ပြီး ကြော်ငြာဝင်သွားတယ်
ကျုပ်ဟာကျုပ် အပျင်းကြီးလို့ မဒေါင်းဘဲ လင့်တွေနဲ့ တင်တာ ဘာဖစ်လဲ
ဟိုမှာပြောတုန်းက ရည်ရွယ်ချက်ကို ရေးမယ်ဆိုပြီး
အတော် တော်တဲ့ ငါ
ဒါ့ပုံတွေလှလိုက်တာအေ။ အခုမှသေသေချာချာမြင်ဖူးတော့တယ်။ တော်တော်ကိုလှချက်။ တင်ပြထားတာလဲ တော်တယ်အေ။ ချီးကျူးပါတယ် တဂျားပဲရှိတဲ့မင်းရေ။ နှစ်ဂျားဆိုရင် နာတဂျားတောက်မယ်နော်အေ့
ဒဂျားမဲ တို့များ ဒဂျားမဲ ပီသပါပေါ့
ဖန်ဆင်းရှင် ဒဂျားမဲ ပေါ့
အင်းးး ရင်တွင်းဖြစ်ဆြာ အလက်ဆင်းက လာပေါနေသကိုး
ဖန်ဆင်းရှင် ပီသအောင် ဖန်ဆင်းလိုက်မယ်
ဒညင်းဝက်ဘေး ဒေါ်ဖွားမေ ရောက်စေသဒီး…..
ချစ်သုဝေလေး တောင် မဟုတ်ဘူး
ချစ်သုဝေလေးက သူ့ကို မေ့လိုက်ပါတော့ တဲ့ ကွယ်
ဂူဂဲကနေ လှတာတွေပဲ ရှာထားတာကိုး
တကယ်ပါ ချာချာလည်ပြီး ရေးထားတာပါဗျာ
နှစ်ဂျားရှိရင် တဂျားတင်မကဘူး အကုန်သောက်ဗျာ
ဂလောက် အားထုတ်ထားရတဲ့ ဘာသာပြန်ကို ကျော်သွားရသလား
မီးပန်းဆိုတာ အင်မတန် မီးခိုးအူတဲ့အမျိုးဗျ
အဲပုံတွေအကုန်လုံးက ကင်မလာထွစ် ဒါမှမဟုတ်
အဲဒါကြောင့် ပြောထားတယ်လေ ကိုဂီရ
အပေါ်က အလှတရား အောက်က side effect ပါဆို
ကောင်းကင်မှာတော့ တဒင်္ဂ လှသွားတာပဲမဟုတ်လား
အရင်တုံးက မီးရှူးမီးပန်းမပေါတော့ သီတင်းကျွတ်မှာ မဖောက်နိုင်ဘူး။
ဒေါ်လေးတို့ ငယ်ငယ်တုံးကလေ တော်လှန်ရေးနေ့နားနီးရင် တော်လှန်ရေးပန်းခြံမှာ မီးရှူးမီးပန်းတွေ ဖောက်ပြတယ်။
အဲဒါကို ပန်းခြံတ၀ိုက်က လာစောင့်ကြည့်ကြရတာ ပျော်စရာကြီး။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံလည်း မီးရှူးတွေနဲ့ ထွန်းပြတယ်။
ည ၈နာရီလောက် မီးရှူးမီးပန်းလွှတ်လို့ပြီးရင် မြေနီကုန်းကနေ မြို့ထဲ လမ်းလျှောက်ပြန်ရတယ်။ဘတ်စ်ကားတွေ မဆန့်တော့လို့။
လွမ်းမိပါသေးတယ် အိုဘယ့် ပြည်သူ့တပ်မတော်။
(သူကြီးတို့ လော့ကျတဲ့အိမ်ကျလိက ဒစ်စနေလဲန်းမှာ စလိပင်းဗျူတီရဲ့ ရဲတိုက်ကနေ မီးရှူးမီးပန်းဖောက်ပြတာ သိပ်လှတယ်တဲ့။လက်ထောက်ချတာ။သဂျီးကို အလုပ်ပေးရအောင်)
တော်လှန်ရေးနေ့မှာ လုပ်တာတော့ မမီဘူး
အခုနောက်ပိုင်းတော့ သင်္ကြန်မှာ ဖောက်တာ မြင်ဖူးတယ်
မကြာခင် ဆီးဂိမ်းမှာတော့ ဝေဝေဆာဆာ ဖြစ်ဦးမယ် ထင်ပါရဲ့
ဒစ်စနေလဲန်းမှာ ဖောက်ပြတာ လှတယ်ဆိုရင်တော့
ရွာထဲ ပြန် ချပြရအောင်လို့လေ
မပြရင်တော့ သဂျီးကို ရာထူးချရအောင်
နေပါအုံး …တဂျား..ညည်းနဲ့ဗျောက်အိုးတွေ..မီးပန်းတွေနဲ့ဘာဆိုင်သတုန်း ….
( အဟီးဟီး …အလွတ်ရန်လုပ်တာ )
ရေးစရာမရှိလို့ ရှိတာရေးတယ် ဘာဖစ်လဲ ဟီဟိ
ငြိမ်ငြိမ်နေ မဟုတ်ရင် ဝရဇိန်စာမိမယ် ငိငိ
သိကြားရေ.. မီးရှူးတွေအကြောင်းပြောပြသွားတာ တကယ်ကို စုံပါပေတယ်။ မီးရှူးတွေကတော့ လှပေမယ့် ဗျောက်အိုးကိုတော့ ဘယ်လိုမှ သည်းခံလို့မရဘူး။ ဗျောက်အိုးဖောက်သံကြားရင် လန့်လန့်သွားလို့ အကုသိုလ်တွေလည်း များရပါတယ်။
မီးရှုးနဲ့ ဗျောက်အိုး တူမှမတူတာကိုး
နှလုံးရောဂါလည်း ရနေဦးမယ် ဂရုစိုက်ဦး
ပုံတွေလည်းလှ.. ဗဟုသုတလဲ ရပါတယ်…
၇ ရာစုအစောပိုင်းကတည်းက မီးရှုး မီးပန်း စဖြစ်ခဲ့တာ…ရာဇ၀င် အမှန်က ဒီလိုကွဲ့ …
တရုပ်မြန်မာ ဘိန်းစစ်ပွဲတွေ ပြီးတော့ စာချုပ်တွေ ချုပ်ကြသတဲ့…
အဲဒီမှာ မြန်မာတွေက ရှုံးတာကို မကျေနပ်လို့ယတြာချေသတဲ့…တရုပ်တွေဘက်ကို အပူတွေ ပြန်ကူးအောင်
မီးပွားတွေ မှုတ်ထုတ်ပြီး ကိုယ့်ရှုး ကိုယ်ပတ်…ကိုယ့်ရှုးကိုပတ် ဆိုပြီး အော်ပြီး ယတြာချေသတဲ့…
အဲဒီမှာ မြန်မာစကားနည်းနည်းတတ်တဲ့ တရုပ်ကလည်း မြန်မာဘုရင်တွေ ယတြာချေတာကို သိတော့ သူတို့ ထက်သာအောင် မီးစတွေ မီးပန်းတွေ မှုတ်ထုတ်ပြီး ..တန်ပြန် ..အနေနဲ့မင်းရှုး မင်းပတ်လို့အော်သတဲ့..
ဒါပေမယ့် စကားက မပီတော့..
မီးရှုး မီးပန်း လို့အသံထွက်သတဲ့…
အဲဒီထဲက တရုပ်တွေက မြန်မာကိုနိုင်ဘို့ယတြာတွေထွင်ပြီး စ ဖောက်ခဲ့သတဲ့…
တရုပ် ယတြာ ဘယ်လောက်စွမ်းလည်းဆို..မြန်မာပြည်မှာ မီးရှုး မီးပန်း ( မင်းရှုး မင်းပတ်) ပြီး
တရုပ်နဲ့ ပါတ်သက်တာမှန်သမျှ ကိုယ်တိုင်မဆုံးဖြတ်ရဲလောက်အောင် ဖြစ်သတဲ့ကွယ်…
မယုံရင် ၃ဆက်မြောက် မင်မင်းဆက်ရဲ့ အဘွားကို မေးကျိဘာ….။
လူကို ငိုရမလို ရယ်ရမလိုဖြစ်အောင် လုပ်သွားတယ် လူဇိုး
ဒီ မီးကို စခဲ့တာက မြန်မာတွေပေါ့
မြန်မာတွေ ယတြာလဲ အောင်ပါတယ်ဗျာ
သူတို့တွေ တစ်ခါတစ်ခါကျ ပြန်ပြန် ပတ်သွားတာပဲလေ
အဲ…သူတို့ဘက်က တန်ပြန်လုပ်တာလဲ အောင်မြင်ပ နော်
ဘာလုပ်လုပ် မြွေမသေ တုတ်မကျိုး လုပ်နေရတယ် အဟိ
အဲ့ မင်မင်းဆက်ရဲ့ အဘွားက
ကိုကြီးကျော်ပါ ပါမှ ဖြေမတဲ့
တာဝတိံသာကို လာပြီး သက်သေထူပေးပါဦးဗျို့